Mahaontsa ny poety ny hanoanana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Endri-piainana mampalahelo ary mampihetsi-po ny poety toy izany no manohina an'i Toetra Ràja, taratra ao amin'ny tononkalony HAODY, nalaina tao amin'ny bokiny TIAKO - TIAKO FOANA ! takila faha 110. Maneho ny tolona natrehan'ny mpangataka iray tsy manan-kohanina sy tsy manan-kialofana ny tononkalo. Andininy vitsivitsy tao no notsongaina, entina hanadihadiana:
- ny halalin'ny hantsana manasaraka ny fari-piainana roa mifangarika
- ny setran'ny fahantrana
- ny lalan-kivoahana.
Ety am-boalohany, ny tononkalo dia maneho sehatra roa mifangarika: ny ao anatiny sy ny ety ivelany. Ny andaniny diboky ny hafaliana, ny ankilany kitroky ny fijaliana. Heno hatrety ivelany ny feon'ny korana, farim-peon'ny haody ilay miandry mana. Mazava ho azy fa tsy misy fifandraisana ireo fa sehatra roa tsy mifangaro:
Ny ao anatiny dia manadino ary ankevitry ny tsy azo helingelenina amin'ny fotoam-piravoravoana. Novolosana hono ilay ety ivelany, izany hoe nialan'ny fitafin'ny fiandrianana, ilay "farafahakelin"'ny fahafaha-mijoro eo anivon'ny tontolo.
Miharihary indrindra eto fa lalim-paka loatra ny fahantran'ilay resin'ny fiainana.
Gonin-tsakafo no hany atao fitafy. Efa tsy fanary ny akanjo rovi-drary fa mazana ny tolona: mahamenatr'olona! Toy ny fandatsana aza ny fijery ilay gony tsy miery teo ambony dabam-pako satria fantapantatra fa mbola hisy hisantatra hibonoka ao anatiny... mandra-pahafatiny?
Miverina indray eto ilay hoe "kaody" tsy ahasahiana mandroso na sanatria hamoha varavarana aza ny tompon-trano. Kaody satria tsy ananana intsony ilay "farafahakeliny" ka satry hanaja tena.
Tonga tampotampoka ny hevitra mirindra, mbola voatampoka ny lafatra indrindra anaty hambom-po: lala-mahasoa.
Hiverina hankaiza moa kanefa ny "lava-trano" aza tsy ananana ? Tsia, fiverenana hiasa no tiany holazaina, amin'ny alalan'ny famolavolana tetikady mba hirosoana tsikelikely any amin'ny tena fandresena.
- antso tody -
Voatanisa eto ny "fo voasasa" ihatahana amin'ny lolom-po. Tsapany tokoa fa miainga amin'ny finoana ny famerenana an'ilay farafahakeliny.
Mety ho moramora kokoa amin'ny olombelona ny mifangaro rehefa misy marimaritra iraisana ny fomba fiaina, izany hoe ho foana ilay "hantsana" voalaza tetsy ambony. Samy hianoka ny tontolon'ny "tsara volo" ny rehetra, izany hoe na ny novolosana nihatahan'ny fitafin'ny fiandrianana aza dia hijoro indray ka afaka miara-milahatra amin'ny mpiara-belona hafa.
Hetahetam-pon'ilay mpangataka ny fandresena, mba hahafahany mifangaro amin'ireo manadino azy ankehitriny. Tsy hiantehatra afa-tsy amin'ny herin'ny tenany izy. Irariana ny hitsanganan'ny fiaraha-monina miara-misondrotra ka :
Tsy hisy ankolafiny, tsy hisy lolom-po, ny fiainana tahafiny no paradisa soa, ankafizin'ny rehetra, hisy hanim-pitoloha, fitia tsy voafetra sy fahatsoram-po!
Ho foana anie ny hanoanana !